Manchester United vs. Brighton & Hove Albion - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 10 Noofambar 2019 - ESPN - Waxay TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Manchester United vs. Brighton & Hove Albion - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 10 November 2019 - ESPN
Manchester United vs. Brighton & Hove Albion - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 10 November 2019 - ESPN
Manchester United ayaa ku soo laabatay qeybtii hore ee kala sarreynta Premier League axadii iyadoo goolal laga dhaliyay Andreas Pereira et by Marcus Rashford iyo yool looga soo horjeedo taas Dav propper ] wuxuu siiyay kooxdiisa 3-1 guriga oo ay kaga badiyeen Brighton.
United waxay u dhaqaaqday booska 7aad iyagoo leh dhibcaha 16 ee dhibcaha 16, iyagoo dheereystay orodkeedii aan laga badinin ee ka dhanka ah Seagulls ilaa 12 tartamada oo dhan, halka Brighton ay u dhacday kaalinta kow iyo tobnaad. Qodobbada 15.
- Fantasy on ESPN Premier League: Hada iska qor!
Kooxda deegaanka ayaa ka faa iidaystay bandhig qurux badan oo shaqsiyadeed Anthony Martial
Tababaraha kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa u hambalyeeyay tababaraha reer France ciyaarta kadib, iyo sidoo kale daafaca bidix (sanadihii 19) Brandon Williams kaas oo sameeyay kulankiisii ​​ugu horreeyay. bilowga Horyaalka Naadiga.
1 Marka loo eego
“Anthony Martial Solskjaer ma uusan dhalin goolka, laakiin wuxuu ahaa nin cajiib ah. "19659002]" Brandon Williams isna aad buu u fiicnaa sidoo kale, wuxuu horay u soo qaatay ciyaaro wanaagsan wuxuuna u muuqdaa inuu doonayo inuu halkaas joogo oo uu madadaalo helo.
Waxay ahayd inaan goolal badan dhaliso. Waa wax qabad weyn oo ka yimid ragga. Markaan aragno iyagoo horay u soconaya, waa wax lagu farxo in la daawado. "
Pereira ayaa United fursad u siiyay daqiiqaddii 17e isagoo dhaliyay gool qurux badan madaama darbad xoogan oo ka timid xerada ganaaxa dhexdeeda ay si xoogan u difaacatay. Ka bax Dale Stephens Ka tagida mas'uulka Brighton Mathew Ryan hor istaagay.
Pereira ayaa markii hore lumiyay xakamaynta kubbada isagoo horay u orday ka hor intaanu Martial quudinin dib u soo celinta. Laad bidix.
Propper ayaa markaa kadib kubad tuuray shabaqiisa labo daqiiqo kadib, ka dib laad xor ah oo uu ka helay Fred kaasoo dhaliyay qalalaase ka dhacay xerada ganaaxa Brighton. Hadafka waxaa lasiiyay ka dib hubinta VAR.
[1965 Lewis Dunk Waxa uu dhaliyay goolkii Brighton daqiiqadii 64e isagoo madax ku dhaliyay ku dhowaad, laakiin Rashford ayaa soo celiyay United labo fursadood oo labo daqiiqo ka dib ay kubad ku dhacday meel u jirta mitirka 12 mitir.
Mar kale goolkii waxa uu ahaa shaqo wacan Martial, kaasoo garaacay daafaca iyo Ryan kubad ka hor inta uusan ka leexin xagal adag ee Rashford.
United ayaa iska qasaarisay dhowr fursadood daqiiqadihii ugu dambeeyay si ay ugu guuleysato iyada oo aad u fog, Rashford ayaa qirtay labo calan
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay si xushmad leh qadka dhexe ee United Scott McTominay dhaawacmay wax yar ka hor fowdada ugu dambeysa ka dib markii labaabeel sida aan dhib lahayn sida ugu macquulsan
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=541728
Bambali (Senegal): Kadib Dugsiga Sare, Sadio Mané wuxuu dhistay Cisbitaal qiimihiisu yahay 2 Million - Culturebene
Liverpool ayaa leh dhibcaha 8 ka dib markii ay garaaceen Man City 3-1